Awstaria waxay aragtaa mawjadda labaad ee coronavirus, jeneraalku wuxuu leeyahay: Live
September 13, 2020 3 min read By wardeeq news Reporter
Awstaraaliya waxaa kajira bilawga mowjad labaad oo ah infekshinka coronavirus, hogaamiyaheeda ayaa yiri, maadaama kiisaska kor usii kacayaan si la mid ah wadamada kale ee EU.
UNHCR waxay kor u qaadeysaa dadaallada lagula dagaallamayo COVID-19 oo ka mid ah tobanaan kun oo qaxooti Suuriyaan ah oo ku jira xeryaha ku yaal Jordan ka dib markii saddexdii kiis ee ugu horreeyay la xaqiijiyay usbuucii hore.
Safarka cirka ee gudaha Wuhan, oo ah xarunta xudunta cudurka Coronavirus ee ka dillaacay, ayaa ku soo laabtay heerarka safka hore iyadoo 500 duulimaad oo gudaha ah Jimcaha, mas’uuliyiinta Shiinaha ayaa sidaas leh.
In ka badan 28.6 milyan oo qof oo adduunka ah ayaa laga helay cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ ku dhowaad 917,000na waa ay dhinteen, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Qiyaastii 19.2 milyan ayaa soo kabsaday.
Waa kuwan wararkii ugu dambeeyay:
Axad, Sebtember 13
12:30 GMT – Lagarde ee ECB ayaa ku boorrisay ‘wax ismacilnimo’ in laga hortago fayraska
Madaxa Bangiga Dhexe ee Yurub Christine Lagarde ayaa sheegtay inaysan jiri karin “ismaandhaafka” dagaalka looga soo kabanayo hoos u dhaca musiibo ee ku habsatay, iyadoo ku boorisay dowladaha inay ku taageeraan dadaalada bangiga dhexe kharashka maaliyadeed.
In kasta oo lacagta Eurozone-ka ay dib uga soo kabaneysay xirnaashihii burburiyey dhaq-dhaqaaqii dhaqaale horaantii sanadkan, Lagarde waxa ay sheegtay in soo kabsashadu wali “aan sinnayn” oo “aan la hubin” iyada oo dhowr waddan ay la daalaa dhacayaan koror ku yimid infekshannada coronavirus.
ECB “waxay sii wadaa inay diyaar u ahaato inay hagaajiso dhamaan qalabkeeda” si ay gacan uga geysato hogaaminta 19-ka koox ee lacagta lacagta ah dhibaatada, Lagarde ayaa ku sheegtay khudbad online ah oo ay ka jeedinaysay kulan ay yeesheen bangiyada dhexe ee Carabta.
12:00 GMT – Ireland waxay qorsheyneysaa inay ku biirto nidaamka guud ee Midowga Yurub ee xaddidaadda safarka ee COVID-19
Ireland waxay qorsheyneysaa inay ku bedesho nidaamkeeda hadda jira ee karantiilida socdaalka midowga yurub ee soo jeedinta nidaamka isku dubaridka isla marka ay diyaar noqoto, ayuu yiri raiisul wasaare Micheal Martin.
Komishanka Yurub ayaa horaantii bishaan soo saaray nidaam wadajira taraafikada waddammada xubnaha ka ah EU si ay isugu dubbaridaan kantaroolka xudduudaha isla markaana loo daweeyo hawsha hadda jirta, ee jahwareerka leh ee xannibaadaha coronavirus ee socdaalayaasha Yurub oo dhan.
Ryanair, oo ah shirkadda duulimaadka ugu badan ee Ireland, ayaa jimcihii ugu baaqday dowladda Martin inay u heellan tahay hirgelinta qorshaha EU.
11:30 GMT – Lufthansa waaxdeeda Switzerland waxay dhimi kartaa boqolkiiba 15 shaqooyinka: Warbixin
Lufthansa qaybteeda Switzerland waxay jari kartaa ilaa 15 boqolkiiba 9,500 shaqooyinkeeda ah haddii aysan la heshiin karin mushahar dhimista shaqaalaha maadaama ay doonayso inay la kulanto bartilmaameedyo adag oo keyd ah ka dib dhibaatada coronavirus, ayay tiri isbuuclaha Switzerland ee Sonntagszeitung.
“Waxaan bartilmaameedkeena nahay inaan ka gudubno dhibaatada inta shaqaale ee ugu macquulsan,” ayuu yiri joornaalka oo soo xiganaya afhayeen u hadlay Switzerland. – Waa inaan dhinnaa kharashka ku dhowaad 20 boqolkiiba. Kaliya diiradda ma saarayno qarashka shaqaalaha, laakiin waxaan diiradda saaraynaa qayb walba oo shirkadda ka mid ah.
Booliska Belarus ayaa xiray 250 qof oo mudaaharaadayay Minsk iyada oo dad badani ay bateen
Isbaheysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa weerara fariisimaha Xuutiyiinta ee Sanca ee Yemen